HUAWEI nova 5T, AI Quad Camera, Ultra Wide-Angle Lens | HUAWEI Myanmar
Inspire Your Moment 48 MP AI Cameras1 | Kirin 980 7nm AI Chipset | 8 GB RAM + 128 GB ROM
HUAWEI nova 5T ရဲ့ ရောင်ပြန်ဒီဇိုင်းပုံစံ၊ ထူးခြားတဲ့အသွင်အပြင်နဲ့ သေသပ်တဲ့အရောင်တို့က အကောင်းဆုံးခံစားချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ ဒီဇိုင်းပိုင်ရဲ့ အချောသတ်ပုံစံနဲ့ အသွင်အပြင်ပုံစံက အလင်းနဲ့၊ အရိပ်တွေကို ပုံဖော်ပေးနိုင်ပါတယ်။.
ဖုန်းရဲ့ ဘေးဘက်မှာပါတဲ့ Fingerprint Sensor က ဒီဇိုင်းပိုင်းအရ ပိုမိုထူးခြားသွားသလို လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ၊ လျင်လျင်မြန်မြန် ဖွင့်နိုင်ပါသေးတယ်။.
HUAWEI မှ စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ ဒီဇိုင်းပိုးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးခဲ့သလို ဒီ HUAWEI nova 5T မှာလည်း ကြီးမားတဲ့ မျက်နှာပြင်-ကိုယ်ထည် အချိုးနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ရဲ့အောက်မှာ ရှေ့ကင်မရာကို မြှုပ်ထားပြီး HUAWEI nova 5T ရဲ့ မျက်နှာပြင်အပြည့်နီးပါး သုံးနိုင်အောင်၊ အတွေ့အကြုံသစ်တွေ ရရှိအောင် ဖန်တီးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
HUAWEI nova 5T ရဲ့ ကျောဖက် AI ကင်မရာလေးခုက အမိုက်စား HD ပုံရိပ်တွေ ဖမ်းယူနိုင်သလို၊ Ultra Wide-Angle, Macro နဲ့ Bokeh ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း အသီးသီးဖမ်းယူနိုင်ဦးမှာပါ။ ကင်မရာက အဆင့်မြင့်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်သလို ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ရှုခင်းဗီဒီယိုတွေ၊ အသက်ရှူမှားလောက်တဲ့ အနီးကပ်ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်ဦးမှာပါ။ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်အချိန်ပဲရောက်ရောက် အစွမ်းထက်တဲ့ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို Algorithms တွေက အရောင်စုံလင်တဲ့၊ Resolution မြင့် ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေကို ရရှိစေမှာပါ။
ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ စံနှုန်းများနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ 1/2-inch sensor တပ်ဆင်ထားတဲ့ 48 MP ကင်မရာနဲ့အတူ တကယ့် Professional တစ်ယောက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ပုံရိပ်တွေကို ကိုယ့်ရဲ့ smartphone နဲ့ ရိုက်ကူးဖန်တီးနိုင်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် AI နည်းပညာနဲ့အားဖြည့်ထားတဲ့ Super Night Mode ဟာဆိုရင်လည်း ပြင်ပအလင်းရောင်အနည်းအများအပေါ် အကောင်းဆုံးချိန်ညှိတွက်ဆပြီး ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ညအလှပုံရိပ်များကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဖန်တီးရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ ကူညီပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန် တမူထူးခြားတဲ့ မြင်ကွင်းကျယ်ပုံရိပ်တွေကို ကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့ ကိုယ်တိုင်ကျိုယ်ကျ ဖန်တီးရိုက်ကူးနိုင်ပါပြီ။ f/2.2 ultra wide-angle lens ကို တပ်ဆင်ပေးထားတာကြောင့် ကိုယ်ရိုက်ကူးဖန်တီးလိုက်တဲ့ ပုံရိပ်တိုင်းဟာ ပြန်ကြည့်လိုက်တိုင်း ထူးခြားကွဲထွက်နေတဲ့ အမြင်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံသစ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ .
လူတော်တော်များများသတိမထားမိကြတဲ့၊ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့လက်တစ်ကမ်းက အရာဝတ္ထုတွေကို ပုံဖော်ရိုက်ကူးနိုင်ပါပြီ။4cm အကွာအဝေးအထိ အနီးကပ်ဆုံးရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ Super Macro Lens နဲ့အတူ ကိုယ့်ရဲ့ကမ္ဘာသစ်ရှာပုံတော် ခရီးစဉ်အတွေ့အကြုံကို အားလုံးနဲ့ဝေမျှလို့ရပါပြီ။
ကိုယ်ရိုက်ကူးမယ့် အရာဝတ္ထု (ဒါမှမဟုတ်) လူ ကို အကောင်းဆုံးပုံဖော်နိုင်မယ့် Bokeh effect ကို ဒီတစ်ခါမှာတော့ Kirin chipset ရဲ့ ISP real-time processing capabilities နဲ့အတူ ပိုပြီးအဆင့်မြှင့်တင်လာခဲ့ပါပြီ။ Mobile ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးဖန်တီးခြင်းကို Professional Potrait ဘုရင်တစ်ဆူအလား အတွေ့အကြုံသစ်ကိုခံစားရစေမှာပါ။ .
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ပင်ကိုယ်အလှတရားကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ မျက်နှာပြင်ပြည့် Display ပေါ်မှာ ခံစားကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ မျက်နှာပြင်အပေါ်ထောင့်မှာရှိနေတဲ့ 32 MP front selfie camera က ကိုယ့်ရဲ့အလှတရားကို AI နည်းပညာနဲ့ အချိုပေါ် သကာလွှမ်းသလို ပြီးပြည့်စုံ ရှုမငြီးတဲ့ အလှတရားကို ပိုလို့ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ကူညီပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ 4-in-1 pixel fusion နည်းပညာရဲ့ ပေါင်းစပ်ကူညီမှုက အလင်းအားပိုကောင်းပြီး ကြည်လင်ပေါ်လွင်တဲ့ အကောင်းဆုံး Selfie အတွေ့အကြုံသစ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ .
ထူးခြားလျင်မြန်တဲ့ Kirin 980 Chipset က 7nm SoC Chipset တစ်ခုဖြစ်ပြီး Lag ခြင်း၊ ထစ်ခြင်းမရှိစေတဲ့ နည်းပညာမြင့်မားမှုတို့နဲ့အတူ ကောင်းမွန်တဲ့ အတွေ့အကြုံအပိုင်းတွေ ပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Dual-NPU က AI ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်၊ မြင့်မားလာတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တို့အပြင် ပါဝါစားလည်းသက်သာစေတာကြောင့် HUAWEI nova 5T ကို လျင်မြန်တဲ့ တုန့်ပြန်မှု၊ သက်သာမှုတို့နဲ့ အကောင်းဆုံးသုံးလို့ရစေမှာပါ။.
HUAWEI nova 5T ရဲ့ 8 GB RAM က လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းကို လျင်မြန်စေမှာဖြစ်သလို 128 GB အထိသိုလှောင်မှုကြောင့်လည်း ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယို၊ App တွေအများကြီးနဲ့ အေးဆေးသုံးနိုင်သလို နှေးကွေးတာမျိုးလည်း မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။.
Super Charging စနစ်
အားသွင်းနှေးတာတွေက နေ့စဉ်ဘဝအတွက် အဆင်မပြေစေပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ဖုန်းအရမ်းသုံးရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် HUAWEI nova 5T ရဲ့ 3750 mAh2ဘက်ထရီက 22.5 W HUAWEI SuperCharge စနစ်ကို အထောက်အပံ့ပေးထားပါတယ်။ မိနစ် 303 အတွင်း 50% အထိအားပြည့်စေနိုင်ပါတယ်။.
GPU Tubro နဲ့ ပြိုင်ပွဲတိုင်းအနိုင်ယူမယ်
GPU Turbo ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်က CPU နဲ့ GPU စွမ်းဆောင်ရည်တွေမှာ ပုံမှန်ထက်ပိုမိုတိုးတက်လာခဲ့သလို Kirin 980 ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် Gaming အတွေ့အကြုံပိုင်းမှာ ထူးခြားကောင်းမွန်လာပါတယ်။ ဒီ Features က ကမ္ဘာပေါ်ရှိနာမည်ကြီးဂိမ်းတော်တော်များများကို အထောက်အပံ့ပေးထားပါတယ်။4
ရှေ့ကင်မရာ - 32 MP High Resolution Lens.
ကျောဖက်ကင်မရာ - 48 MP High Resolution Lens + 16 MP Ultra Wide Angle Lens +2MP Bokeh Lens +2MP Macro Lens.
ထုတ်ကုန်အရောင်၊ ပုံစံ၊ အသွင်အပြင်နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ရည်ညွန်းချက်သက်သက်သာဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင် အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။
3750 mAh ဘက်ထရီသည် ပုံမှန်ပမာဏဖြစ်ပြီး 3650 mAh သည် အနည်းဆုံးပမာဏဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ပမာဏမှာ HUAWEI ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဘက်ထရီသက်တမ်းသည် အခြေအနေအမျိုးမျိုးပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
HUAWEI ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေ - 25°C အပူချိန်၊ Humidity - 45% မှ 80%. 22.5 W HUAWEI SuperCharge အားသွင်းခြင်းကို အသုံးပြုထားပြီး ဖုန်းသည်4G Network ဖွင့်ထားသောအအြေနေနှင့် Screen ပိတ်ထားသောအခြေအနေတို့တွင် 3% မှ စသွင်းခြင်းဖြစ်သည်။.
GPU Turbo သည် Kirin Chipset များအပေါ်အတွင် အခြေခံထားသော Graphic ပိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သလို Software နှင့် Hardware ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဂိမ်းအချို့ကိုသာ အထောက်အပံ့ပေးသည်။.